Ezra 8 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Motu Mutauro Wemasaini WekuJamaica Mutauro Wemasaini wechiBelgian French Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wechiSwiss German Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuIreland Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuMyanmar Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSlovenia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Navajo Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pennsylvania German Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Roman) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zulu
Vanhu vari kudzoka naEzra (1-14)
Kugadzirira rwendo (15-30)
Kusimuka kuBhabhironi uye kusvika kuJerusarema (31-36)
8 Ava ndivo vaiva vakuru vedzimba dzemadzibaba avo uye ndiko kunyorwa kwakaitwa mhuri dzevaya vandakabuda navo muBhabhironi ndikaenda navo panguva yaitonga Mambo Atashasta:+ 2 pavanakomana vaFiniyasi,+ Geshomu; pavanakomana vaItamari,+ Dhanieri; pavanakomana vaDhavhidhi, Hatushi; 3 pavanakomana vaShekaniya uye pavanakomana vaParoshi, Zekariya, uyo akanyorwa pamwe chete nevanhurume 150; 4 pavanakomana vaPahati-moabhi,+ Erieho-enai uyo aiva nevanhurume 200, ari mwanakomana waZerahiya; 5 pavanakomana vaZatu,+ Shekaniya uyo aiva nevanhurume 300, ari mwanakomana waJahazieri; 6 pavanakomana vaAdhini,+ Ebhedhi uyo aiva nevanhurume 50, ari mwanakomana waJonatani; 7 pavanakomana vaEramu,+ Jeshaya uyo aiva nevanhurume 70, ari mwanakomana waAtariya; 8 pavanakomana vaShefatiya,+ Zebhadhiya uyo aiva nevanhurume 80, ari mwanakomana waMikaeri; 9 pavanakomana vaJoabhi, Obhadhiya uyo aiva nevanhurume 218, ari mwanakomana waJehieri; 10 pavanakomana vaBhani, Sheromiti uyo aiva nevanhurume 160, ari mwanakomana waJosifiya; 11 pavanakomana vaBhebhai,+ Zekariya uyo aiva nevanhurume 28, ari mwanakomana waBhebhai; 12 pavanakomana vaAzgadhi,+ Johanani uyo aiva nevanhurume 110, ari mwanakomana waHakatani; 13 pavanakomana vaAdhonikamu,+ vaya vakanga vari vekupedzisira, mazita avo aiva: Erifereti, Jeyieri, naShemaya, uye vaiva nevanhurume 60; 14 uye pavanakomana vaBhigvhai,+ Utai naZabhudhe, avo vaiva nevanhurume 70. 15 Ndakavaunganidza parwizi runouya kuAhavha,+ uye takadzika musasa ipapo kwemazuva matatu. Asi pandakaongorora vanhu nevapristi, hapana muRevhi wandakawana ipapo. 16 Saka ndakashevedza Eriyezeri, Arieri, Shemaya, Erinatani, Jaribhi, Erinatani, Natani, Zekariya, naMeshuramu, varume vaitungamirira, uyewo Joyaribhi naErinatani, avo vaiva varayiridzi. 17 Ndakabva ndavapa murayiro pamusoro paIdho mutungamiriri wemunzvimbo inonzi Kasifiya. Ndakavati vaudze Idho nehama dzake, vashandi vepatemberi* vaiva muKasifiya, kuti vauye nevashumiri veimba yaMwari wedu. 18 Sezvo ruoko rwakanaka rwaMwari wedu rwaiva patiri, vakauya nemurume akangwara ainzi Sherebhiya+ wekuvanakomana vaMari+ muzukuru waRevhi mwanakomana waIsraeri; vakauya naye nevanakomana vake nehama dzake, varume 18; 19 naHashabhiya, uyo aiva naJeshaya wekuvaMerari,+ nehama dzake nevanakomana vadzo, varume 20. 20 Uye paiva nevamwe vashandi vepatemberi 220, vaya vakanga vapiwa basa naDhavhidhi nemachinda rekubatsira vaRevhi uye vese zvavo vakanga vasarudzwa nemazita avo. 21 Ndakabva ndazivisa kuti titsanye ipapo parwizi rwaAhavha, kuti tizvininipise pamberi paMwari wedu, kuti timukumbire kuti atitungamirire parwendo rwedu, uye atidzivirire isu nevana vedu nezvinhu zvedu zvese. 22 Ndakanyara kukumbira mambo kuti atipe varwi nevatasvi vemabhiza kuti vatidzivirire pavavengi munzira, nekuti takanga tati kuna mambo: “Ruoko rwakanaka rwaMwari wedu ruri pane vese vanomutsvaga,+ asi simba rake nekutsamwa kwake zvinorwisana nevaya vese vanomusiya.”+ 23 Saka takatsanya tikakumbira kuna Mwari wedu pamusoro peizvi, uye akanzwa kuteterera kwedu.+ 24 Ndakabva ndatsaura vakuru 12 kubva pavakuru vevapristi, vaiti, Sherebhiya, Hashabhiya,+ pamwe chete nehama dzavo gumi. 25 Ndakabva ndavayerera sirivha negoridhe nemidziyo, mupiro weimba yaMwari wedu wakanga wapiwa namambo navanachipangamazano vake nemachinda ake nevaIsraeri vese vakanga varipo.+ 26 Ndakavayerera ndikaisa mumaoko avo matarenda* 650 esirivha, midziyo yesirivha 100 inorema matarenda maviri, matarenda 100 egoridhe, 27 ndiro diki 20 dzegoridhe dzinokosha madhariki* 1 000, nemidziyo miviri yemhangura tsvuku yakanaka uye yaipenya, iyo inokosha segoridhe. 28 Ndakabva ndati kwavari: “Muri vatsvene kuna Jehovha+ uye midziyo yacho mitsvene, uye sirivha negoridhe racho mupiro wapiwa nekuzvidira kuna Jehovha Mwari wemadzitateguru enyu. 29 Nyatsozvichengetai kusvikira mazviyera pamberi pevakuru vevapristi nevaRevhi nemachinda edzimba dzemadzibaba aIsraeri muJerusarema,+ mudzimba dzekudyira dzeimba yaJehovha.” 30 Uye vapristi nevaRevhi vakatora sirivha negoridhe nemidziyo zvavakanga vayererwa, kuti vaende nazvo kuJerusarema kuimba yaMwari wedu. 31 Takazobva parwizi rwaAhavha+ pazuva rechi12 remwedzi wekutanga+ kuti tiende kuJerusarema, uye ruoko rwaMwari wedu rwaiva nesu, uye akatinunura paruoko rwemuvengi nepavanhu vaihwandira munzira. 32 Saka takasvika muJerusarema+ tikazorora kwemazuva matatu. 33 Pazuva rechina takayera sirivha negoridhe nemidziyo muimba yaMwari wedu+ tikazvipa Meremoti+ mwanakomana wemupristi Urija uyo aiva naEriyezari mwanakomana waFiniyasi, uye vaivawo nevaRevhi vaiti Jozabhadhi+ mwanakomana waJeshua naNoadhiya mwanakomana waBhinui.+ 34 Zvinhu zvacho zvese zvakaverengwa zvikayerwa, uye uremu hwazvo zvese hwakanyorwa. 35 Vaya vakabva kuutapwa, vaimbova nhapwa, vakapa zvibayiro zvinopiswa kuna Mwari waIsraeri, mikono 12 yemombe+ yevaIsraeri vese, makondohwe 96,+ makwayana makono 77, nenhongo 12+ kuti chive chibayiro chechivi; zvese izvi zvaiva chibayiro chinopiswa kuna Jehovha.+ 36 Takabva tapa machinda amambo+ nemagavhuna* enharaunda yeMhiri kweRwizi*+ zvakatemwa namambo, ivo vachibva vapa rubatsiro kuvanhu nekuimba yaMwari wechokwadi.+
^ Kana kuti “vaNetinimu.” ChiHeb., “vanhu vakapiwa,” kureva kuti vakapiwa sezvipo.
^ Mumutauro wakatanga kushandiswa, pano paiva nezita rekuPezhiya rinoreva kuti “vanochengetedza umambo” zvichireva magavhuna ematunhu eUmambo hwePezhiya.
^ Kana kuti “eMhiri kwaYufratesi.”